perspective | YoeYar CG Blog | Page 2
အသစ်ဆောက်မယ့် MDIS Campus အတွက် အခန်းတွေလုပ်တော့ တော်တော် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ လွယ်လည်းလွယ် ၊ Render ကလည်းမြန် ဆိုတော့။
ဒါကတော့ စင်္ကာပူ Strait Times မှာ ဖော်ပြခံရဖူးတဲ့ 3D perspective ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
MDIS News Page
Once inawhile, being featured inanewspaper is not bad at all. I’ll keep that asamemo.
ကြောင်လိမ်လှေကားဆိုတာ အမြင်အရ သာ ကြီးကျယ် ခမ်းနားတာ။ 3D နဲ့ ဆွဲတော့ အင်မတန် လက်ပေါက်ကတ်အောင် ဆွဲရတယ်။ Modeling တစ်ခုထဲတင် အချိန် အများစု ယူသွားတယ်။
Kenny Hills: Duta Grande - Grand Staircase
ဒီပုံကိုဆွဲတော့ လှေကားထစ်တစ်ခုနဲ့ လက်ရန်းတစ်ခုကို အသေးစိတ် Model လုပ်လိုက်တယ်။ နောက် လိုအပ်တဲ့ အမြင့်ရအောင် တဖြောင့်တည်း တန်းစီပြီး Copy ကူးလိုက်တယ်။ အားလုံးကို Group လုပ်ပြီး FFD Box Modifier ပေးတယ်။ အမြင့် ပြန်ညှိတယ်။ Bend Modifier ထပ်ပေးတယ်။ Gizmo ကို နည်းနည်း ကစားပေးလိုက်တယ်။
Kenny Hills Grand Staircase 3D
ကြားထဲမှာ Horizontal အဆင့်တစ်ခုရှိတော့ အဲဒီနေရာအတွက် Edit Mesh ထပ်ပေးတယ်။ လက်ရန်းနဲ့ လှေကားထစ်တွေ အကုန်လုံးကို Vertex Level တစ်ခုချင်းဆီ သေချာလိုက်ညှိတယ်။ ကော်ဇောအတွက် Plane တစ်ခုကို Bend လုပ်တယ်။ Segment level ကို လှေကားထစ်တွေနဲ့ ညီအောင် Plan View မှာ လိုက်ညှိတယ်။ နောက် Edit Mesh ထပ်ပေးတယ်။ Edge တွေကို Chamfer လုပ်ပြီး Segment တွေ ပွားယူတယ်။ လှေကားထစ်နေရာတွေအတွက် တစ်ထစ်ချင်းဆီ ဆွဲမြှင့်တယ်။ UVW ကို Bend အောက်ကို ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။ အပေါ်ဆုံးက Unwrap UVW တစ်ခုပေးပြီး အသေးစိတ်တွေ ပြန်ညှိတယ်။
Modeling ကအချိန်ကုန်ပေမယ့် Render က အင်မတန်မြန်တယ်။ ၁၅ မိနစ်။
Adria Spiral Staircase
ဒါက FarEast: Adria အတွက် ရှေးဦး အဆိုပြုချက်တွေထဲက တစ်ခု။ ပိုလက်ဝင်တယ်။ Metal တွေကြောင့် Render Time လည်း ပိုကြာတယ်။ နောက်တော့ Archi သမားတွေ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တာနဲ့ လှေကားပေါက် ပျောက်သွားတယ်။ သေရော။ လုပ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော။